Tirakoobka Isticmaalka Internetka 2021: Xogtu Waligeed Ma Seexan 8.0 | Martech Zone
Isniin, November 1, 2021 Isniin, November 1, 2021 Shirley Stark
Dunida sii kordheysa ee digitized, oo ay uga sii dartay soo ifbaxa COVID-19, ayaa sannadahan waxa ay soo kordhiyeen waa cusub oo tignoolajiyada iyo xogtu ay qayb weyn oo muhiim ah ka ciyaaraan nolol maalmeedkeena. Suuqgeyste kasta ama ganacsi kasta oo halkaas ka jira, hal shay ayaa hubaal ah: saamaynta isticmaalka xogta ee deegaankeena casriga ah ee dhijitaalka ah ayaa shaki la’aan kor u kacay maadaama aan ku jirno qarka weyn ee masiibadayada hadda. Inta u dhaxaysa karantiil iyo xidhitaanka baahsan ee xafiisyada, bangiyada, dukaamada, makhaayadaha, iyo in ka badan, bulshadu waxay si weyn u beddeshay joogitaankeeda khadka tooska ah. Marka aan baraneyno la qabsiga waaga cusub, xogtu weligeed ma seexato.
Si kastaba ha ahaatee, dib u soo celinta wakhtiyadii hore ee covid-ka, cadadka xogta la abuuray iyo la wadaaga ayaa mar hore sii fidaysay, in kastoo si tartiib ah. Tani waxay xaqiiqdii muujinaysaa in isbeddellada internetku ay halkan u joogaan inay sii jiraan mustaqbalka la filayo, iyo helitaanka xogtu way sii socon doontaa inay koraan.
50% shirkadaha ayaa bilaabay inay isticmaalaan falanqaynta xogta si ka badan marka loo eego waqtiyadii hore ee masiibada. Tan waxaa ku jira in ka badan 68% ganacsiyada yaryar sidoo kale.
Sisense, Warbixinta BI & Warbixinta Falanqaynta
Intee in le'eg ayay xogtu horumartay?
Qiyaastii 59% dadkeena adduunka ayaa helay internet-ka, halka 4.57 bilyan ay yihiin isticmaale firfircoon - tani waa qiyaastii 3% koror marka loo eego sanadkii hore, tusaale ahaan 2019. Tirooyinkaas, 4.2 bilyan waa isticmaaleyaasha mobilada firfircoon halka 3.81 bilyan ay isticmaalaan baraha bulshada.
Gobolka 2021 ee Warbixinta Xarunta Xogta
Marka la eego sida COVID-19 uu noo siiyay helitaanka shaqaale fogfog oo aad u weyn, waxaan si badbaado leh u sheegan karnaa in mustaqbalka shaqadeena uu yimid, oo ay ka bilaabato guriga! – Ugu yaraan wakhtiga la joogo. Hal dariiqo oo lagu eego qiyaastan waa sida soo socota:
Waqtigan xaadirka ah, mustaqbalka shaqadu waa guriga. Karantiil ka hor, qiyaastii 15% dadka Mareykanka ah waxay ka shaqeynayeen gurigooda. Hadda waxaa la qiimeeyay in boqolkiiba ay kortay ilaa 50%, taas oo war wanaagsan u ah goobaha iskaashiga sida Kooxaha Microsoft, kaas oo leh celcelis ahaan 52,083 qof oo ku soo biiraya daqiiqaddii.
Zoom, shirkad shir fiidiyoow ah, ayaa kor u kac weyn ku arkay isticmaalayaasha. Kalfadhiyadoodii maalinlaha ahaa ee App-ka ayaa ka kordhay wax ka yar laba milyan bishii Febraayo ilaa ku dhawaad ​​toddobo milyan bishii Maarso, iyada oo celcelis ahaan 208,333 qof ay kulmayaan daqiiqad kasta.
Dadka aan awoodin in ay si shakhsi ah ula sheekeystaan ​​​​ayaa sii kordhaya isticmaalka fiidiyowga. Inta u dhaxaysa January iyo March, Google Duo Isticmaalka ayaa kordhay 12.4 boqolkiiba, iyo ku dhawaad ​​27,778 qof ayaa ku kulmay Skype daqiiqadii.
Ilaa dilaacitaanka, WhatsApp, oo ay leedahay Facebook, ayaa la arkay kororka isticmaalka boqolkiiba 51.
Daqiiqad kasta oo dhaafto, qadarka xogtu si aad ah ayey u balaadhataa; hadda, tani waxay u tarjumaysaa ilaa 140k sawiro ay soo dhejiyeen isticmaalayaashu daqiiqaddaas, taasina waa uun Facebook.
Shirkadaha gaarka loo leeyahay sida Facebook iyo Amazon, si kastaba ha ahaatee, maaha kuwa kaliya ee haysta xogta. Xitaa dawladuhu waxay isticmaalaan xogta, tusaalaha ugu badan ee la fahmi karo waa codsiga raadinta xidhiidhka, kaas oo dadka uga digaya haddii ay wali u dhow yihiin qof qaba COVID-19.
Tani waxay ka dhigan tahay in xogta hadda aysan muujineynin wax calaamado ah oo hoos u dhigaya koritaankeeda, waxaana jira tirooyin lagu taageerayo sheegashadan. Tirooyinkan uma badna inay dib u dhacaan wakhti dhow, waxaana la saadaalinayaa inay kor u kacdo marka tirada dadka internetka ee adduunka oo dhan ay sii kordhayaan waqti ka dib.
Waxaa jira wada sheekeysi fiidiyoow ah oo loogu talagalay is dhexgalka, adeegyada gaarsiinta casriga ah ee dalbashada nooc kasta oo shay ah, barnaamijyada fiidyaha ee madadaalada, iyo wixii la mid ah. Natiijadu waxay tahay, xogta si joogto ah ayaa loo soo saaraa iyada oo la adeegsanayo gujisyada xayaysiiska, saamiyada warbaahinta, falcelinta warbaahinta bulshada, wax kala iibsiga, fuulista, baahinta macluumaadka, iyo in ka badan.
Intee in le'eg ayaa soo saarista xogtu dhacdaa daqiiqad kasta?
Maskaxda ku hay in xogta la soo saaro daqiiqad kasta. Aynu eegno xogtii u dambaysay ee ku saabsan inta xog ee la soo saaray daqiiqaddii dhijitaalka ahayd. Laga bilaabo tirooyinka qaar ee qaybta madadaalada:
Rubuca hore, mid ka mid ah madal baahinta internetka ee caanka ah ee sii kordheysa Netflix ku daray 15.8 milyan oo macaamiil cusub ah, taasoo ah koror boqolkiiba 16 ah oo taraafikada ah Jannaayo ilaa Maarso. Waxa kale oo ay ururisaa ku dhawaad ​​404,444 saacadood oo fiidiyoow ah
Aad ugu jeceshahay YouTubers soo rog ku dhawaad ​​500-saac oo muuqaal ah
Fiidiyowga caanka ah ee abuurista & madal wadaaga Tiktok waxa la rakibay ilaa 2,704 jeer
Kordhinta qaybtan oo leh heeso qaar ayaa ah Spotify taasoo ku kordhinaysa qiyaastii 28 raadad maktabadeeda
U socoshada warbaahinta bulshada, taas oo ah qaybta ugu aasaasiga ah iyo qaybta caanka ah ee bulshadeena internetka.
InstagramShabakadda wadaagga aragga ee ugu caansan adduunka, waxay leedahay 347,222 isticmaalayaasha sheekooyinkeeda oo keliya, iyadoo 138,889 ay ku dhufatay xayeysiisyada astaanta shirkadda.
Twitter waxay ku daraysaa ku dhawaad ​​319 xubnood oo cusub, iyada oo ku sii wadata xawligeeda xusuus iyo doodo siyaasadeed.
Facebook Isticmaalayaasha - hadday yihiin kun-sano, boomers, ama Gen Z - waxay sii wadaan inay wadaagaan ilaa 150,000 oo farriimo ah iyo sawirro lagu qiyaasay 147,000 oo ku yaal goobta ugu caansan ee warbaahinta bulshada.
Xagga isku xidhka, tiradu aad bay kor ugu kacday ilaa xilligii covid-ka-hor:
Madal isgaarsiineed oo soo ifbaxday Kooxaha Microsoft waxay isku xiraan ilaa 52,083 isticmaale
Tiro lagu qiyaasay ilaa 1,388,889 qof ayaa sameeya wicitaano muuqaal iyo cod ah
Mid ka mid ah madal fariimaha qoraalka ah ee sida aadka ah loo isticmaalo WhatsApp waxa uu leeyahay in ka badan 2 bilyan isticmaaleyaal firfircoon kuwaas oo wadaaga 41,666,667 fariimo
Codsiga gudbinta fiidiyowga Zoom wuxuu martigeliyaa 208,333 ka qaybgalayaasha shirarka
Wararka fayraska ah iyo madal wadaaga macluumaadka Reddit waxay arkaysaa ilaa 479,452 qofood oo ku hawlan nuxurka
Halka shabakada shaqada ku jihaysan ee LinkedIn ay leedahay isticmaaleyaal codsanaya 69,444 shaqo
Laakin, adigoo xogta meel iska dhigaya, bal ka waran lacagta daqiiqad kasta lagu isticmaalo internetka? Macaamiisha ayaa la filayaa inay ku qarashgareeyaan ku dhawaad ​​1 milyan oo doolar internetka.
Intaas waxaa sii dheer, Venmo Isticmaalayaasha waxay gudbiyaan in ka badan $200k oo lacag-bixinno ah, iyadoo in ka badan $3000 lagu kharash gareeyay abka mobaylada.
Amazon, shirkadda caanka ah ee suuq-geynta internetka, waxay soo dirtaa 6,659 shixnad maalintii (Mareykanka oo keliya). Dhanka kale, gaarsiinta khadka tooska ah & goobta wax lagu qaato ee Doordash diners ayaa dalbanaya ku dhawaad ​​555 cunto.
Sida bulshadeenu u horumarayso, ganacsiyadu waa inay sidoo kale la qabsadaan, taas oo had iyo jeer u baahan isticmaalka xogta. Tuug kasta, guji, like, ama share kasta waxa ay gacan ka geysataa xog ururin aad u weyn, taas oo horseedi karta in la ogaado shuruudaha macaamiishaada. Natiijo ahaan, marka tirooyinkan si taxadar leh loo qiimeeyo, macluumaadka la helay ayaa caawin kara fahamka aad u wanaagsan ee adduunka ku socda xawaare xawli ah. Sababtoo ah COVID-19, shirkadaha intooda badani waxay u shaqeeyaan si kala duwan, oo haysashada xogta dhabta ah ee ku saabsan hawlahooda iyo deegaankooda waxay awood u siin kartaa inay qaataan go'aamo wanagsan si ay u noolaadaan, iyo xitaa u barwaaqoobaan, iyagoo ka jawaabaya.
Tags: 2021isticmaalayaasha internetka ee firfircoonAmazonFacebookgoogle duoinfographictirakoobyada instagramisticmaalayaasha mobilada ee internetkatirakoobka internetkaisticmaalka internetkatirakoobka isticmaalka internetkaKooxaha Microsoftdareentirakoobka warbaahinta bulshadaxaaladda bi iyo falanqayntaxaaladda xarunta xogtaxogtu weligeed ma seexatoXogta twitterkaalayWicitaanada videowicitaanada codkaXogta youtubezoom
Shirley Stark waxay hadda ka shaqeysaa InfoCleance oo ah Hoggaanka Kooxda Suuqgeynta. Waxay khibrad gacmeed u leedahay suuqgeynta B2B waxayna jeceshahay inay qorto baloogyada, talooyinka, akhrinta maqaallada b2b, Abuurista xeelado ganacsi iyo socdaal.